သဘာဝကပ်ဘေးအလွန်နှင့် ကလေးများ၏ စိတ်ဒဏ်ရာ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သဘာဝကပ်ဘေးအလွန်နှင့် ကလေးများ၏ စိတ်ဒဏ်ရာ	Posted by mm thinker on June 7, 2008
Posted in: Article, Nargis.	Tagged: Article, Nargis.	၇.၂.၂၀၀၅ ထုတ် နိုင်ငံတကာ သတင်းလွှာဂျာနယ်တွင် `ဆူနာမီရိုက်ခတ်မှုနှင့် ကလေးများ၏ စိတ်ဒဏ်ရာ´ အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ကျနော်ရေးခဲ့ပါသည်။ ထိုဆောင်းပါးထဲမှ ယခု နာဂစ်အလွန် ပြန်ထောင်ထူထောင်ရေးတွင် အထောက်အကူပေးနိုင်မည်ဟု ယူဆသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်တင်ပြထားပါသည်။ အင်တာဗျူးနှင့် ရည်ညွှန်းစကားများမှာ ဆူနာမီဖြစ်စဉ်အတွက် ဖြစ်သော်လည်း နာဂစ်အလွန်ထူထောင်ရေးတွင် သတိပြု လိုက်နာစရာများဟု မြင်မိပါသည်။ ဤဆောင်းပါးကို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ ဖြန့်ချိ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
စစ်ပွဲတစ်ပွဲ ဆင်နွှဲရသောအခါ မတိုက်ခိုက်ကြရမည့်နေရာ၊ မထိခိုက်သင့်သူများ၊ အရပ်ဘက်နေရာ၊ စစ်ဘက်နေရာ စသည်ဖြင့် ချုပ်ကိုင်တားမြစ်ခြင်း၊ စောင့်စည်းခြင်း လုပ်နိုင်သေးသည်။ ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်း၊ ငလျင်စသော သဘာဝဘေးဒဏ်များ ကပ်ရောက်နှိပ်စက်သည့် အခါတွင်မူကား စောင့်စည်းအပ်သောအရာ အားနည်းခြင်း အားများခြင်း ကျောသားရင်သားဟူသည်မရှိပြီ။ အားလုံးထိခိုက်ကြ ဒဏ်ခံကြရသည်သာ။
သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှု အားနည်းသေးသော ကလေးငယ်များ သေဆုံးရမှုမှာ အများစု ဖြစ်သလို အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သော ကလေးငယ်များမှာလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များ ရရှိကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေသည်။ သဘာဝဒဏ်ခံ ဒေသများအဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော သန့်ရှင်းသည့်ရေ၊ အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးနည်းတူ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးသွားရသော ကလေးများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပြန်လည်ထူထောင်ပေးရန် လိုအပ်နေပေသည်။
လူဝီစီယားနားပြည်နယ်၊ နယူးအော်လင်းရှိ အိုချက်စနာ ဆေးပေးခန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကလေးအထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာမိုက်ကယ် ၀က်ဆာမန်က
`စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ တော်တော်ကြီးမားပါတယ်။ ကလေးတွေက ဘာမှအပြောင်းအလဲမရှိဘူးလို့ နားလည်ထားခဲ့ကြတာ။ ဒီအချက်ကြောင့် အဖြစ်ဆိုးကြီးက သူတို့ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့နားလည်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ ပျက်သုန်းသွားတယ်´ ပြောပြသည်။
ကလေးများ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးကူညီရန် အရေးကြီးသော ပထမအဆင့်မှာ သူတို့၏ ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ၊ တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်မှုများ ပြန်လည်ရရှိရေးဖြစ်သည်။ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်နိုင်ရန်မှာ အရေးကြီးသည်။ ကျောင်းသားများ စာသင်ရန် အခြေအနေပေးသည် မပေးသည်က ပဓာနမဟုတ်။ သို့မှသာ သူတို့လည်ပတ်နေကျ ဘ၀ပုံစံမျိုး ပြန်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသားတွေ မရှိခြင်းသည် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပင်။ က�
��လးများမှာ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို နားလည်နိုင်ရန် ငယ်လွန်းနေသေးသည်။ ဆူနာမီသင့်ပြီးနောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် ကလေးများအလွယ်တကူ စုစည်းနိုင်စေရန် တဲကြီးများ ထိုးပေးထားသည်။ သဘာဝဘေးဒဏ်အကြောင်း အဖြစ်အပျက် သတင်းဇာတ်လမ်း ဓာတ်ပုံတို့သည် ဘေးဒဏ်သင့် ဒေသမှ ကလေးများကိုသာမက အခြားအရပ်တပါးမှ ကလေးများအတွက်လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ သေဆုံးမှုနှင့် ပျက်စီးမှု သတင်း ဓာတ်ပုံများသည် ကလေးများ၏ စိတ်တွင် လုံခြုံမှုအတွက် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးအထူးကု ဒေါက်တာဝက်ဆာမန်က
`ကလေးတွေ မခံစားနိုင်တဲ့ သတင်းမျိုးကို ကလေးတွေနဲ့ မထိတွေ့အောင် ဂရုစိုက်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ၁၂ အရွယ်ကလေး ခံစားနားလည်နိုင်တာကို ၆ နှစ်အရွယ်ကလေး မခံစားနိုင်ဘူး´
ဟု ပြောသည်။ ဟောင်ကောင်မှ ၆ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားလေး ဇာဗီယာလီကဲ့သို့သော ကလေးများမှာ ဆူနာမီ၏ ကြေကွဲဖွယ်ဒဏ်ချက်များ ရိုက်ခတ်မှုကို ခံရသည်။
`လူတွေ အများကြီးသေလို့ သားစိတ်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းတယ်´
လို့ ဇာဗီယာက ပြောပြပါတယ်။ ကြေကွဲဖွယ် ဇာတ်လမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများ၊ ဆရာများက ကလေးများရှေ့တွင် များများစားစားမပြောကြရန်နှင့် ပြောရလျှင်လည်း ကလေးများ နားလည်သလောက်သာ ပြောရန်၊ သတင်းအချက်အလက်များ များပြားစွာ ပေးခြင်း၊ နားထောင်စေခြင်း၊ မေးသမျှ ဖြေခြင်းအားဖြင့် ကလေးများအတွက် အသိတရားပေးရာ မရောက်ဘဲ အကြောက်တရားပေးရာရောက်သည်ဟု ဒေါက်တာဝက်တာမန်က အကြံပြုသည်။ ကလေးများ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိပ်ပျော်သည့် ပုံစံကိုကြည့်၍ ကလေးများ စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ၀မ်းဗိုက်အောင့်ခြင်းသည်လည်း ကလေးများ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားရခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကလေးများ ကူမရေးအဖွဲ့မှလည်း လူကြီးများက ကလေးတို့၏ အပြုအမူကို ဂရုပြု ကြည့်ရှုရန် အကြံပေးထားသည်။ ကလေးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်၏ လွှမ်းမိုးမှုကို မကြာခဏ ခံရတတ်သည်။ လူကြီးများက ပြုမူတုံ့ပြန်ပုံမျိုး ကလေးများက တုံ့ပြန်မည်ဟု မမျှော်လင့်အပ်ပေ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ တမျိုးတဘာသာဖြစ်နိုင်သည်။ အတိတ်တွင် ကြုံခဲ့သော ဘေးဒဏ်ခံကလေးများကို တိုးတက်မှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးများသည် မကြာမီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ပြန်လည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ `ကလေးတွေဟာ ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားတဲ့ သူတို့ဘ၀နဲ့ သူတို့မိသားစုတွေ ဆုံးရှုံးသွားတာကို နားလည်လာမှာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို တွန်းလှန်လာနိုင်မှာပါ။ ကျနော်တို့ အတွေ့အကြုံအရ အနာဂတ်မှာ သူတို့ ပြန်လည် ရပ်တည်နိုင်ပြီး ရှင်သန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်´
ဟု ကလေးများကူမရေးအဖွဲ့မှ အရာရှိကပြောသည်။ သင်ကာ
ရည်ညွှန်း။ ။ Treating Children’s Emotional Wounds Rate this:Share this:EmailTwitterFacebookPrintRedditLike this:Like Loading...
← နာဂစ်မတိုင်ခင် ရန်ကုန် vs နာဂစ်အပြီး ရန်ကုန်	နာဂစ်အလွန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (၁၀) →	Pages	about